Hadda waxaad ku martiqaadi kartaa dadka kale inay wax ka beddelaan dukumintiyadaada ku jira Photoshop iyo kuwa kale | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | muujiye, Photoshop, dhowr
Dukumiintiyada wadashaqeyntu waa nidaamka maalinta iyo Adobe ma doonayo inuu lumiyo coba arrintan la xiriirta ku dhawaaq maanta in Photoshop, Illustrator, iyo Fresco ay hadda taageeraan iskaashiga dukumiintiyada.
Si kale haddii loo dhigo, Adobe wuxuu fududeynayaa wada shaqeynta dukumintiga maanta iyo hagaajinta socodka shaqada kooxda ka shaqeynta mashaariicda naqshadeynta. Waxaa jira hawl cusub oo casuumaad ah in wax laga beddelo taasina lafteeda ayaa badbaadin u ah kooxahan ka wada shaqeeya mashaariicda.
Muuqaalkan cusub ee Photoshop, Illustrator iyo Fresco ogolaanaya tafatirka dukumintiga asynchronous ha ahaato qalabka sida desktop, iPad iyo iPhone. Taas oo macnaheedu yahay in naqshadeeyayaashu ay mid mid ugu tafatiri karaan dukumiintiyada la wadaago ee daruuraha ku jira.
Aad u fudud sida loo keydiyo dukumiinti mid ka mid ah seddexdaas barnaamij daruuraha si aad u riixdo badhanka casuumaadda. Waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan galno emaylka kaqeybgalayaasha waxayna heli doonaan casuumaada si ay awood ugu yeeshaan inay wax kaga beddelaan dukumiintiyadaas daruurta. Kuwani waa labada ficil ee lagama maarmaanka u ah in lagu raaxeysto muuqaalkan cusub ee Photoshop, Illustrator iyo Fresco.
Isla sidaas ayaa dhici doonta markii nalagu casuumay si aan dukumintigaas daruurta ugu furno, ama xitaa jiidaya hantida.adobe.com ama isla codsi aan ku hayno miiska 'Cloud Cloud desktop'.
Waxaan ku jirnaa a waqti muhiim u ah wada shaqaynta kooxda iyo in aan leenahay xalal kaladuwan oo kaladuwan. Awoodda loo leeyahay in lagu saxo waraaqaha internetka ama dukumintiga qoraalka Google wuxuu ka mid ahaa bilowgii dhammaan isku-darka barnaamijyada keydinaya geeddi-socodka si kooxaha ay wax soo saar badan u yeeshaan; Xitaa hadda Adobe waa loo wada dhan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Photoshop, Illustrator iyo Fresco hadda waxay ogol yihiin iskaashi ku saabsan dukumiintiyada